ဘဝမှတ်တိုင်: Shush! Ringer Restorer
“ ဟေ့ကောင် ငါဖုန်းခေါ်နေတာကြာလှပြီ .. ဘာလို့မကိုင်တာလဲ ”
“ ဟာ ဆောရီးကွာ .. ငါ meeting ၀င်နေရလို့ ဖုန်းကို silent လုပ်ထားတာ ..
ပြန်ဖွင့်ဖို့ မေ့သွားတယ် ”
“ မင်းကွာ အရေးကြီးပြောစရာရှိပါတယ်ဆိုမှ .. အေး မင်းကြိုက်နေတဲ့
ကောင်မလေး ခုနက ငါတို့နဲ့အတူ မုန့်စားနေတာ .. မင်းကို ခေါ်မလို့ပဲ .. ခုတော့ နောက်ကျသွားပြီ .. ခံပေါ့ကွာ ”
“ ဟာ .. သေပါတော့ကွာ .. ”
တွေ့လား ဘော်ဒါ ဒါမျိုးလေးတွေက ဖြစ်တတ်တယ်။ အစည်းဝေးရှိလို့ ဖုန်းကို silent လုပ်ထားပြီး ပြန်ဖွင့်ဖို့ မေ့တတ်သူတွေအတွက် Shush! က
ကူညီပါလိမ့်မယ်။ Shush! ကို install လုပ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။ အစည်းဝေး(သို့)silent လုပ်စရာ အခြေနေတစ်ခုခု ဖြစ်လာရင် ဖုန်းရဲ့ Volume ခလုတ်ကို အဆုံးထိ တိုးလိုက်ပါ။ Shush! app လေး သူ့လိုလို ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ Timer ပေးလိုက်ပါ။ Timer ပြည့်သွားတာနဲ့ Shush! က
ဖုန်း Volume ကို နဂိုမူလအတိုင်း ပြန်ကျယ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
လန်းတယ်နော် .. လိုအပ်ရင် အခုတကည်းက ထည့်ထားလိုက်ပေါတော့
download - Shush! Ringer Restorer
by...La min maung
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/22/2013 06:43:00 am